Salman Khan Oo La Iman Doona Filimka Wayn ee Action-ka ah Race 3 Eid 2018
Mega Star Salman Khan awooda lixaada leh ee uu fanka Hindiya ku horkacaayo 7-sano ee ugu dambeesay wuxuu ku yeeshay sameynta filimada Masala ah kuwo Action, shactiro, qiiro iyo heeso wacan leh sidoo kalena qof walbo daawan karo.
Salman Khan wuxuu ku qaldamay sameyntii Tubelight madaama uu ka leexday xeerkii uu fanka Hindiya ku heestay hadana ma doonayo inuu qalad labaad galo.
Sidaa darteed Salman Khan wuxuu bilaabi doonaa sameynta Race 3 marka uu dhameestiro duubista Tiger Zinda Hai.
Qorshaha wuxuu ahaa inuu Salman sameeyo filimka Dance-ga ah ee uu ku jilaayo aabo gabbar 13-jir ah u joogto lana jileyso Jacqueline Fernadez.
Laakiin filimkaas meel ayuu iska dhigi doonaa wuxuuna aqbalay Race 3 oo mada daalo dhameestiran leh xarako dheeraadna uu kusoo bandhigi doono.
Ramesh Taurani oo madax u ah shirkada Tips ayaa sheegay inuu 4-sano daba joogay Salman Khan sidii uu Race 3 kaga saxiixi lahaa haatana uu ku faraxsan yahay in Sallu mashruucaan hogaamiye ka noqon doono.
Filimka Race 3 waxaa Director ka noqon doono Remo D’Souza oo meel iska dhigay filimka Dance-da Daddy ee Salman Khan u sameyn lahaa waxayna isaga Sallu ku heshiiyeen inay marka kowaad Race 3 sameeyaan kadib filimka kale Daddy ku xijiyaan.